News – Cele Seven
သားေလးလားသမီးေလးလား ဆိုတာလည္းပရိသတ္ေတြသိခ်င္ေနေအာင္ လုပ္လိုက္တဲ့ သူထူးစံ တို႔ဇနီးေမာင္ႏွံ…
ပရိသတ်ကြီးရေ တစ်ချိန်က video ဇာတ်ကားလေးတွေကနေ ပရိသတ်အားပေးမှုတွေ ရရှိထားတာကတော့ သူထူးစံ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့နိုင်ငံကျော်အနုပညာရှင်တစ်ယောက် ဖြစ်ပြီး ပရိသတ် အချစ်တော်တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်ဒမီဆုရရှိပြီးနောက်ပိုင်း အနုပညာ အလုပ်တွေ နဲ့ ဝေးကွာနေခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်းလူမှုကွန်ရက်ကနေ ပုံရိပ်လေးတွေကို …
April 3, 2022 By LY C News
”’ေဒါင္း”’ ကဘယ္လို စိတ္ဓါတ္မ်ိဳးဆိုတာ ျပည္သူေတြသိရွိေစဖို႔ေျပာျပလာတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေဒါင္း……
ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် ဒေါင်း ကတော့အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးကြီးမှာ ပြည်သူ နဲ့ အတူရဲရဲဝင့်ဝင့်တော်လှန်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာသရုပ်ဆောင် ဒေါင်းက ထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်နေပြီး မြန်မာနိုင်ရဲ့ တော်လှန်ရေးကြီးမှာ တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က ပါဝင်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ သရုပ်ဆောင် ဒေါင်း ကတော်လှန်ရေး နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သူရဲ့ပြတ်သားတဲ့စ်ိတ်ဓာတ်ကိုပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ …
March 25, 2022 By LY C News
မၾကာခင္ MRTV4မွာထုတ္လႊင့္ျပသေတာ့မယ့္ ဇာတ္လမ္းတြဲအသစ္ေလးကို မိတ္ဆက္လိုက္တဲ့ မင္းသမီးေလး ေဆာင္းဝတ္ရည္ေမ…..
ပရိသတ်ကြီးရေ ဇာတ်လမ်းတွဲ မင်းသမီးလေး ဆောင်းဝတ်ရည်မေ ကတော့ လက်ရှိမှာ ပရိသတ် တွေ ကြားမှာ ရေပန်းစားနေ တဲ့ မင်းသမီးလေး တစ်လက် လို့ဆိုရမှာပါနော်။ဆောင်းဝတ်ရည်မေ လေးကတော့ ဇာတ်လမ်းတွဲ တွေသာမက ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကြီးတွေမှာ လည်း …
March 18, 2022 By LY C News
(၆)လျပည့္တဲ့ေန႔ရက္ကေလးမွာ ဖခင္ႀကီးအတြက္ရည္စူးၿပီး ေရးစပ္ထားတဲ့ ရတနာမိုင္ရဲ့ သီခ်င္းသစ္ေလး…….
ပရိသတ်ကြီးရေ ရတနာမိုင် ကတော့ ဒီနေ့မှာ သီချင်းအသစ်လေး တစ်ပုဒ် ထပ်မံထွက်ရှိလာခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့လူမှု ကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ မျှဝေဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ်။ သီချင်းလေး ကတော့ သူ့ရဲ ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ဖခင်ကြီးကို လွမ်းဆွတ် တမ်းတစွာနဲ့ ခံစားချက် တွေကို ထည့်သွင်း …
March 17, 2022 By LY C News
ဘာေတြမ်ား ျပဳလုပ္လိုက္လို႔ ဆယ္ေက်ာ္သက္ကေလး လိုျပန္ငယ္သြားရတာလဲ မင္းသားႀကီး မင္းဦးရယ္…..
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် မင်းဦး ကတော့ သူခေတ် သူ့အခါက အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ မင်းသားတစ်ဦး ဖြစ်သလို ယခုအချိန် ထိလဲ အောင်မြင်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ဗွီဒီယို ဇာတ်ကားများစွာအပြင် ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားများစွာ နှင့် MRTV-4 ဇာတ်လမ်းတွဲများ ကို …
March 15, 2022 By LY C News
ေသြးမေတာ္ သားမစပ္ေပမယ့္ မိသားစုရင္းလို ခ်စ္ရတဲ့ ေဂဟာဝန္ထမ္းေတြဆီက လက္ေဆာင္ရလို႔ ေပ်ာ္ေနရွာတဲ့ ခိုင္ႏွင္းေဝ ရဲ့ ဗီဒီယို……
ပရိသတ်ကြီးရေ မင်းသမီးလေး ခိုင်နှင်းဝေက တော့ ရုပ်ရှင်နှင့် ဗီဒီယိုတွေမှာ အကောင်းဆုံ သရုပ်ဆောင်နိုင် တာကြောင့် ပရိတ်သတ် အားပေးမှု အခိုင်အမာရရှိထားခဲ့သူတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ခိုင်နှင်းဝေ က အသက်အရွယ် တစ်ခုရောက်ရှိလာချိန်မှာ တော့ အနုပညာလုပ်ငန်းတွေထက် လူမှုအကျိုးပြု ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေကို …
March 14, 2022 By LY C News
ေနာက္ဆုံးရိုက္ခဲ့တဲ့ အမိုက္စားအလန္းစား Pre wedding ဓါတ္ပုံေလးေတြကို ပရိတ္သတ္ေတြဆီေဝမၽွလာတဲ့ စိန္ၿဖိဳးနဲ႔ ရီရီ…..
ပရိသတ်ကြီးရေ စိန်ဖြိုးက တော့ တစ်ခတ်တစ်ခါ နာမည်ကြီးမင်းသမီးနန္ဒါလှိုင် ရဲ့ အငယ်ဆုံးမောင်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာအလုပ်တွေ ကို မောင်ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး အခုချိန်မှာတော့ မော်ဒယ်လ် မင်းသမီး​ဟောင်း တ​စ်လက်ဖြစ်တဲ့ ရီရီပွင့်ဖြူ နဲ့ ချစ်သူတွေဖြစ်ကာလက်ထပ်ဖို့ ပြင်ဆင်နေကြပြီပဲ …
March 13, 2022 By LY C News
တစ္ကယ္ဘဲ ေဖေဖ စည္ၿဖိဳးေျပာသလို အေဒၚျဖစ္သူ ဝင္စားတာလားဆိုတာ ပရိသတ္ႀကီးတို႔ ဝင္ၾကည့္လိုက္အုံးေနာ္……
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…..ဇာတ်ဝင်ခန်းတိုင်း မှာ ပီပြင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုတွေ နဲ့ အတူ ဖြူစင်ရိုးသားတဲ့ စိတ်ဓာတ်လေး တွေကြောင့် အချစ်တွေပို နေရတာကတော့ သရုပ်ဆောင်စည်ဖြိုး ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူသရုပ်ဆောင်တဲ့ ဇာတ်ကားတိုင်းကလည်း ပရိသတ်တွေကို ခံစားမှု ရသတွေပေး နိုင်တာကြောင့်ချစ်နေရတာပါ။ ဆင်းရဲ ချမ်းသာမရွေး …
March 11, 2022 By LY C News
အတုအေယာင္ ဆက္ဆံေရးေတြကို မႀကိဳက္ဘူးလို႔ ပရိတ္သတ္ေတြဆီရင္ဖြင့္လာတဲ့ သ႐ုပ္ေတာင္ အိေခ်ာပို………..
ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင်အိချောပို ကတော့အမိုက်စားဘော်ဒီ နဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီး အနုပညာအရည်အချင်းလည်း ပြည့်ဝတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။လက်ရှိမှာ သရုပ်ဆောင် အိချောပိုက အနုပညာအလုပ်တွေကို ဆက်တိုက်လုပ်ကိုင် နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ် ဒီနေ့မှာတော့ အိချောပိုက လုပ်ယူပြတဲ့ ဆက်ဆံရေးတစ်ချို့ကိုကိုယ်မကြိုက်တော့သလို လုပ်ယူပြတဲ့ အပြုံးတစ်ချို့ကိုကိုယ်မနှစ်သက်တော့ဘူး တစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့ဆုံတိုင်းမှာ ပေါ့ပါးရယ်မောစွာ …
ခပ္မိုက္မိုက္ အၾကမ္းစားပုံစံေလးေတြနဲ႔ ျမင္ေတြ႕ရေတာ့မယ့္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေနရဲ ရဲ့ အခ်စ္ႀကိဳးဝိုင္း ဇာတ္ကားသစ္….
ပရိသတ်ကြီးရေ သဇင်ထူးမြင့် နဲ့ နေရဲ တို့နှစ်ယောက်ကတော့ ဇာတ်ပို့ ဟာသ သရုပ်ဆောင် ခင်လှိုင် ရဲ့ သားသမီးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက် အဖြစ် ရပ်တည် နေပေမယ့် အဆိုပိုင်းကိုလည်း ဝါသနာပါတဲ့ နေရဲ ကတော့ …
March 10, 2022 By LY C News